Wasaarad kamid ah Wasaaraddaha Dowlad goboleed-yada oo Xiriirka u jartay Wasaaradda Dastuurka Federaalka – Kismaayo24 News Agency
by admin 20th February 2018 051
Wasaaradda Dastuurka ee maamulka Koofur Galbeed ayaa shaaca ka qaaday in xiriirkii ay la lahaayeen Wasaaradda Dastuurka dowladda Federaalka, kaddib war qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Wasiirka Dastuurka Koofur Galbeed C/llaahi Sheekh Xasan.
Qoraalka ka soo baxay Wasiir C/llaahi Sheekh Xasan ayaa lagu sheegay in dafiraad weyn loo geystay Wasaaradda Dastuurka Koofur Galbeed, isla markaana uu dafiraadaas ka dambeeyay Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Sidoo kale dafiraadaasi ayaa lagu macneeyay in ay timid, kadib markii booqasho la filayay in Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya oo ay qeyb ka ahaayeen Guddiyada Dastuurka labada gole ay ku tagi lahaayeen Baydhabo ay baaqatay, isla markaana aan Wasaaradda Dastuurka lagu soo wargelin.
Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil iyo Guddiyada Dastuurka ayaa safaro ku kala bixinayay deegaanada maamul goboleedyada, kaasoo la xiriira sidii wadatashi loogu soo sameyn lahaa Dastuurka, lalana kulmo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada deegaanka.
Madaxweyne Faraamjo iyo Ra’isul Wasaare Kheyre oo Ka Tacsiyadeeyay Geeridii ku Timid Allaha ha u Naxariistee….
SAWIRRO:- Wasiirka Caafimaadka Dawladda FS oo booqatay Dhaawacyadda Qaraxii Zoobe ee la geeyay Dalka Suudaan
Daawo Sawirro: Madaxweynaha yaman oo Warqadaha Aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha Cusub ee Soomaliya u fadhin doona Dalkaasi
Tifaftiraha K24 25th December 2016
Daawo: Hab maamuuska qurxoon ee madaxweyne farmaajo loogu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada dalka turkiga ee magaalada ankara
Tifaftiraha K24 26th April 2017